Zidane, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Lucas…(Miyuu noqon doonaa asbuucoodii ugu dambeeyay ee Real Madrid?) – Gool FM
(Madrid) 18 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ciyaarteeda ugu dambeysa xilli ciyaareedkan garoonkeeda ku meel gaarka ah ee Alfredo Di Stefano kusoo dhoweyn doonto naadiga Villarreal.
Ciyaartaas oo ah tan ugu dambeysay La Liga fasalkan ayaa noqon karta mid go’aamin karta horyaalnimada Spain maadaama Los Blancos labo dhibcood ka dambeyso kooxda horyaalka ugu cad cad ee Atletico Madrid.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaartaas ayaa laga yaabaa inay noqoto tii ugu dambeysay oo ay Madrid u ciyaaraan Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Isco, Lucas Vazquez kuwaasoo dhammaantood shaki laga gelinayo mustaqbalkooda sii joogista caasimadda Spain.
Waxaa sidoo kale miiska saaran mustaqbalka Macallin Zinedine Zidane taasoo la micno ah in xiddigaha aan xusnay iyo macallinkooda ay u noqoto maalintoodii ugu dambeysay ee Madrid.
Qandaraasyada Ramos iyo Lucas ayaa dhici doono dhammaadka bisha dambe, illaa iyo haatanna ma jiraan wax is af garad ah oo ku aaddan inay Real Madrid heshiiska u kordhiso xiddigahan.
Dhan kale kalena, waayaha Marcelo iyo si la mid ah Isco ayaa u muuqda kuwa kasii dhammaanaya kooxda caasimadda Spain ka dhisan kaddib markii ay lumiyeen muhiimaddii ay u lahaayeen kooxdooda labadii fasal ee ugu dambeysay.
Raphael Varane ayaa arrintiisa lagu tilmaami karaa budo kale oo gaar u tumman maadaama uu diiday kordhinta qandaraaskiisa maadaama heshiiskiisu dhici doono 2022, waxaana laacibkan uu xiiso badan ka helayaa kooxaha England ka dhisan ee Chelsea iyo Manchester United.
Marka laga soo tago xiddigahaas, waxaa dhinaca kale la hadal hayaa inuu Tababare Zidane markii saddexaad macsalaameyn doono Bernabue isagoo horraan uga fariistay ciyaarista kubadda cagta naadigan 2006-dii sidoo kalena shaqadeeda macalinnimo uu iska casilay sanadkii 2018.
Si kastaba ha ahaatee, kulanka Real Madrid ay la ciyaareyso naadiga Villarreal ayaa lagu macsalaameyn doonaa ugu yaraan qaar ka mid ah shaqsiyaad kore.